Degaanka Wisil booqasho uma baahna ee badbaadin ayuu rabaa | KEYDMEDIA ONLINE
Degaanka Wisil booqasho uma baahna ee badbaadin ayuu rabaa
Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye ‘Qoorqoor’ ayaa maanya la filayaa inuu gaaro degaanka Wisil oo hoos taga degamada qaddiimiga ah ee Hobyo, halkaas oo dagaallo kharaar ka dhaceen billowgii todobadkaan.
GAALKACYO, Soomaaliya - Wararka ka imaanaya magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya in Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye ‘Qoorqoor’ uu maanta ku wajahan yahay degaanka Wisil ee koofurta gobolka Mudug, halkaas oo dagaal qasaaro xooggan geysatay uu ka dhacay 27-kii bishii Juun ee la soo dhaafay, kaas oo u dhaxeeyay Al-Shabaab iyo dadka degaanka.
Qoorqoor, oo gobolka u tagay inuu ka qeyb qaato tacsida, ayaa la filayaa inuu isku soo sawiro goobihii ay dhibaatadu dhacday billawgii todobaadkaan, taaas oo ah dhaqan uu ka dhaxlay kooxda fadhigoodu yahay Muqdisho ee isaga ku fariisiyay kursiga dhiigga leh ee MW Galmudug.
Dadka ku dhaaqan degaanka ayaa sheegaya in booqasho aan waxba ka soo bixin aysan muhiim ahayn xilligaan, taas-baddalkeedana Madaxda Galmudug laga rabo in ay la yimaadaan qorsho rasmi ah oo lagu badbaadiyo Wisil iyo degaannada hoos taga oo qarka u saaran in markii ugu horreysay taariikhda ay Al-Shabaab ka taliyaan.
Tan iyo markii uu dhacay weerarkii khasaaraha badan dhaliyay ee todobaadkii hore, ma jiro howl-gal ka dhan Al-Shabaab oo Maamulka Qoor-qoor qaaday, sidoo kale ma jiro difaac xooggan oo shacabku isku halleyn karo oo yaalla degaaanka, taas oo sababtay in guud ahaan magaalada laga barakaco.
Al-Shabaab, waxa ay laba jibbaareen dhul ballaarsiga ay ku hayaan Gobolka Mudug, ku dhawaad 10 duullaan oo ay ku qaadeen degaanka Bacaadweyn, muddo afar bilood gudahood ah ayay ugu danbeyn la wareegeen billowgii bishii Ramadaan, kadib markii ay ka itaal roonaadeen dadka degaanka.
Khuburada ka faalloota arrimaha amniga ayaa sheegaya in degaanka Wisil uu ku socdo jidkii Bacaadweyn, taas oo Maamulka Galmudug ee Qoorqoor hoggaanka u hayo looga baahaan yahay in ay badbaadiyaan.